Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Resabe tamin’ny karaman’ny mpanazatra vaovaon’ny ekipam-pirenena baolina kitra (2010) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Avrily 2021 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Ny baolina kitra  no fanatanjahantena malaza indrindra any Maraoka. Hany ka vonona ny hamoaka vola be hanakaramana mpanazatra vaovao ho an'ny ekipany, antsoina hoe Les lions de l'Atlas ny Fikambanan'ny baolina kitra Maraokana. Nanomboka nitady fomba hanarenana ny vokatra ratsy sy hanatsarana ny fahombiazan'ny ekipa nasionaly ny fikambanam-pirenena nandritra ny fiadiana ny Amboara Eran-tany. Natomboka ny fifampiraharahana niaraka tamin'ilay teratany Belza Eric Gerets , izay notendrena ho mpanazatra ofisialin'ny ekipa Maraokana . Saingy nolavin'ireo mpitarika ny hanambara ny fe-potoana nifanarahana sy ny vola nekeny homena ilay mpanazatra vaovao raha ny marimarina kokoa. Nanontanian'ny parlemanta Maraokana momba ny karaman'ilay mpanazatra vaovao ny minisitry ny fanatanjahantena maraokana ary nandà ireo tarehimarika navoakan'ny fampitam-baovao  [amin'ny teny arabo]. Araka ny tsaho nandeha dia karama azo lazaina ho betsaka indrindra ka hahatonga an'i Gerets ho ilay mpanazatra nasionaly be karama indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny Fabio Capello  any Grande Bretagne. Nanaitra ny bilaogera sasany naneho hevitra momba ny vaovao izany. Na dia manan-danja any Maraoka aza ity fanatanjahantena ity dia maro no mihevitra fa azo nampiasaina tamim-pahendrena kokoa ilay vola.
Tezitra i Abdelhamid ao amin'ny bilaogy Qalam Tha'ir  noho ny habetsahan'ny karama izay tokony horaisin'ilay mpanazatra vaovao. Manoratra izy:
Manontany tena  i Anas ao amin'ny bilaogy Big Brother Maroc momba ny tsiambaratelo manodidina ny karaman'ny mpanazatra vaovao. Manoratra izy:
Mihevitra i Citoyen Hmida fa tokony handinika ny tena zava-misy  ny manampahefanan'ny baolina kitra Maraokana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/04/21/152333/
 baolina kitra: http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
 Eric Gerets: http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Gerets
 mpanazatra ofisialin'ny ekipa Maraokana: http://www.frmf.ma/communication-medias/communiques/179-communique-du-bureau-federal-5-juillet-2010.html
 tarehimarika navoakan'ny fampitam-baovao: http://www.youtube.com/watch?v=QxNMczYvgnI&feature=player_embedded
 Qalam Tha'ir: http://moslim-marocain.blogspot.com/
 Manontany tena: http://www.bigbrother.ma/2010/07/le-salaire-deric-gerets-plus-quun.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/uNYO+(BigBrother.ma)
 handinika ny tena zava-misy: http://www.citoyenhmida.org/les-lions-de-latlas-nous-coutent-decidement-bien-cher/